Ukuthola ku-Intanethi ngokuba ngabasebenza ngokuxhumana (ODC)
Ukuzuza ngokushesha futhi ngokushesha: the Umsebenzi di Ukuxhumana (ODC) yindawo entsha ka inzuzo su Internet.
Yiba Umsebenzi di Ukuxhumana Kulula: bhalisa, wabelana ngezixhumanisi ozithandayo futhi wakhe owakho inzuzo ngokushesha nangendlela enenzuzo.
Uthola ngokuchofoza? Kusukela namuhla ungaba, u-opharetha Wokuxhumana
Thola i-Web Srl - The I-100% yokuqala imvelaphi kaMessina uyakujabulela ukumemezela ukuzalwa kwensizakalo entsha ezoguqula umqondo wokwenza imali kwi-inthanethi. Ukuthola ngokuchofoza kuzoba ukubonga okusheshayo futhi okulula kungxenyekazi entsha Abasebenza ngokuxhumana (ODC).
Kodwa uba kanjani Umsebenzi Wokuxhumana? Elula: ngokubhalisa kusayithi lethu, uzokwazi ukufinyelela ezinhlobonhlobo zemikhiqizo futhi Izinsiza ze-B2B kanye namathuluzi adingekayo, wonke MAHHALA futhi ngokushesha futhi kalula. Alukho ulwazi lwekhompyutha oluthuthukile oludingekayo, vele wenze i- "Copy + Paste" yesixhumanisi sesikhulumi sakho osithandayo (i-Facebook, Twitter, Instagram njll), ngokuthumela ama-imeyili namabhanela e-video enzelwe izinkampani, bese Imakethe ye-B2B.
Unquma ukuthi uwushicileleni, yimuphi umkhiqizo ongawukhangisa futhi ongowuthumela, ngaphandle kwezithiyo noma izindleko ezengeziwe: kukuwe kuphela ukuthi ukhethe umkhiqizo ofanele kakhulu wohlobo lwamakhasimende ofuna ukufinyelela kuwo nokuwufaka kumjikelezo webhizinisi lethu.
Ukuhlanganisa Ukuthengisa kanye nezinsizakalo ezinikezelwe Ekubonakaleni kweWebhu
Phakathi kwezinsizakalo eziningi ezingaxhunyaniswa uzothola: i-Suite of Services enikezelwe ekubonakaleni kwiWebhu ka Umjikelezo Wokuhlelwa Wokuthola kweWebhu - Izinsizakalo Zokuqashwa Kwezakhiwo zezinkampani (kusuka ezimotweni eziya kuma-PC nokunye okuningi) - Izinqubomgomo Zomshuwalense Wezinkampani Nezitolo - ICyber ​​Security Services - Ezokuphepha Emsebenzini - Isoftware Yabaqondisi beComominium kanye Nabaqeqeshi Bomsebenzi - Ukubonisana Ngebhizinisi - Ukubonisana Kwentela - Ukunikezwa Kukagesi Namagesi Ezinkampani Nabaqeqeshi kanye nokunye okuningi okuzocebisa umnikelo.
Uma nje kuchofoziwe kusixhumanisi sakho, ikhasimende lizobuyiselwa kumasayithi ethu bese lilandelwa uhlelo Ukumaketha Ukuhlanganisa: imali yakho yekhomishini izobalwa ngokususelwa kokubhaliselwe kwenye yezinsizakalo ezabiwe nguwe, ngenzuzo ezokhuphuka ngokubonakalayo.
Umsebenzi ngamunye uzohlala ubonakala kuphaneli yakho yokulawula, lapho ungabheka khona inqubekelaphambili yokuthunyelwe kwakho nenombolo yokuthenga okwenziwe ngokuhamba kwesikhathi. Abasebenza ngokuxhumana yinsizakalo entsha yokwenza izinto enikeza wonke umuntu ithuba lokuthola inzuzo B2B kanye nokusebenza kwe Ukumaketha Ukuhlanganisa, okwenza kutholakale ulwazi lwenkampani enkulu esevele isungulwe emakethe njenge Thola i-Web Srl kanye nabalingani bayo, abaningi ngokwengeziwe nsuku zonke, ababakhona kulo lonke elase-Italy futhi bekhula njalo.
Ukuthola okuningi nokuthola imininingwane yakamuva, vele ulinde kuze kube uSepthemba futhi konke ukuneliseka kufanele kwaneliswe. Okwenzelwe ukwazi kakhulu, okwamanje, ama-athikili amanye ale nkonzo entsha azoshicilelwa njalo kule blog.
Tags: ukumaketha kokuzibandakanya othintana naye izinsizakalo ze-b2b
Categories: I-Blog Esemthethweni, Izindaba